प्रधानमन्त्री आज स्विट्जरल्यान्ड जाँदै, नेपाल विश्व आर्थिक मञ्चमा पहिलो पटक सहभागी हुँदै - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन आइतबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा नेपालले पहिलोपटक सहभागिता जनाउन लागेको हो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली बेलुकी आठ बजे त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनवरी २२ मा ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया’मा र जनवरी २३ मा ‘सेपिङ दी फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ शिर्षकमा नेपालको तर्फबाट धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनवरी २४ मा जी–ट्वान्टी मुलुकसहितका देशका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान लागेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित १९ जना सहभागी रहनेछन् । प्रधामन्त्री ओली माघ १२ गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम छ ।
भिडियो कन्फरेन्स विवाद : असुरक्षित सरकारी सर्भर
काठमाडौ । नागरिकको विवरण र सरकारी कामकारबाहीको तथ्यांक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको […]
विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश,के छ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ?
काठमाडौं । सरकारले विवादति बनेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । सूचना तथा […]
‘घोक्रो सुकिसक्यो, अलकत्रा उप्किसक्यो’ भन्दै कांग्रेस नेता गगन थापा धर्नामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगनकुमार थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धर्ना बसेका छन् । […]
आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य,स्वघोषणा झुटो ठहरिएमा कैद
काठमाडौं । नागरिकता विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य गरेको छ । बाबुको पहिचान हुन […]
‘संविधान दिवसको बिदा तास खेल्न,गर्लफ्रेण्ड-ब्वाइफ्रेण्ड भेट्न होइन,आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुहोस्-‘मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउनका लागि आ–आफ्नो […]
काठमाडौ । उपचारार्थ सिंगापुर उड्नुअघि प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सोच्नेलाई चेतावनी दिएका थिए, ‘म अझै १५ वर्ष […]